Baphi abasebenzisi be-gvSIG -Geofumadas
Meyi, 2012 GvSIG, Internet kunye neBlogs
Kule mihla i-webinar kwi-gvSIG iya kubonelelwa ukuba ifunde okungakumbi malunga neprojekthi. Nangona injongo eyomeleleyo yale yimarike ethetha isiPhuthukezi njengoko isenziwa kwisakhelo somsitho weMundoGEO, ubungakanani bayo buya kuqhubeka, ke sithatha ithuba lokuhlalutya amanye amanani endiwabonileyo kumava am.
I-GvSIG iyeyona nkqubo yoLwazi lweJografi exhaphakileyo kwimeko yokuthetha iSpanish kwaye mhlawumbi iprojekthi enesicwangciso-qhinga samazwe aphesheya esifuna uzinzo eluntwini endaweni yenkxaso. Ngaphandle kokuba sisixhobo esibekwe phambili ngokucacileyo njenge-GIS yedesktop, ukhuphelo olungama-100,000 lwenguqulo efanayo lwenza inani elinomdla labasebenzisi abavela kumazwe angama-90 kunye neenguqulelo kwiilwimi ezingama-25. Eyona nto inokubakho ekugxilwe kuyo njengomxhasi omncinci weziSeko zeDatha yeZakhiwo (ii-IDEs) apho inokuxhasa khona iiprojekthi ezisebenzisa ezinye izixhobo zoMthombo ovulekileyo.
Ndiye ndathetha ngezi zihlandlo eziliqela, ngoko ndincoma niselo ye gvSIG, ngoku makhe sihlole apho abo basebenzisi bekhona, usebenzisa le mibuzo malunga ne-2,400 imibuzo endiyifumene kwii-Geofumadas kwiinyanga zokugqibela, apho igama elithi gvSIG lifakwe njengegama elingundoqo.
Igrafu ibonisa amazwe apho imibuzo ivele khona. Ngesizathu esithile kunzima ukuba ndibandakanye iSpain ngenxa yezizathu zokufakwa kweekhowudi kubalinganiswa, kuba sukucinga ukuba kulula ukubeka umzobo onje kungeniso lwebhlog, kunye ne-HTML5; Ukuhambisa imouse kubonise ubungakanani obuchaziweyo kamva.
Ekuqalekeni ungabona indlela esabele ngayo i-gvSIG iLatin America neSpain, kodwa yabona ukuba nayo ivela njani kumazwe aseYurophu nakwamanye amazwekazi apho iiprojekthi ziya kuqhuba i-gvSIG nangona bengathethi iSpanish zijoliswe kwiGeofumadas.
Ekuqapheliseni abo ba gvSIG
Ngoku masibone le grafu, apho ungabona indawo ebekwe yi-gvSIG. Ngenxa yoku ndiqwalasele inani lophando kodwa ndenze umlinganiso wokuthelekisa kwisigidi ngasinye sabasebenzisi be-intanethi ilizwe ngalinye elinalo (hayi abemi). Ubomvu ngumlinganiso, luhlaza okwesibhakabhaka linani lokukhangelwa kwisampulu yemibuzo engama-2,400.
Inomdla, iSpain ilandelwa yi-Uruguay, eParaguay, eHonduras naseBolivia.
Emva koko i-block yesibili apho i-El Salvador, i-Ecuador, i-Costa Rica neVenezuela.
Kwaye i-Panama, iRiphabliki yaseDominican, iChile ne-Argentina.
Wonke umntu angazenza izigqibo zakhe, kodwa inyani kukuba eyona ndawo ibalulekileyo yenzekayo kumazwe anezixhobo ezinqongopheleyo zoqoqosho, nangona ukufikelela okuncinci kwi-Intanethi kubangela ingxolo ebangela ukuba umlinganiso unyuke. Oku kuhlala ngaphezulu kokucacileyo, kodwa kuyakhuthaza kuba la ingamazwe apho zenzeka khona Amanani aphakamileyo aphikisayo. Apho ubukho be-GIS obunini bunenkampani ezimbalwa; Njengoko sibona iPeru, iArgentina kunye neChile, ngaphandle kokuba noluntu olusebenzayo lwabasebenzisi be-gvSIG, baneenkampani ezisebenza nzima kakhulu ukunyanzela iiprojekthi zokuphumeza amaqonga angavulekanga, ikakhulu i-Esri.
Apho kukho abasebenzisi abaninzi be-gvSIG
Kwaye ekugqibeleni makhe sijonge le grafu. Imalunga nalapho abasebenzisi be-gvSIG belizwe, besebenzisa ipesenti enxulumene nenani elifanayo lotyelelo olusebenzisa i-gvSIG njengegama eliphambili.
Isiqingatha sabasebenzisi baseSpeyin, apho nangona kungesiyo kuphela isixhobo samahhala, ukubeka kwiinkampani ezinikeza uqeqesho, iifunivesithi kunye noluntu oluntu lufanelekile ukuhlaziywa okuthile.
Emva koko kukho i-25% ehlala eArgentina, eMexico, eColombia naseVenezuela; Ngaphandle kokuba ngamazwe anezigidi ezininzi zabasebenzisi kwi-intanethi, uluntu lwabantu base-GvSIG luye lwafaka negalelo kwiSiseko, ngakumbi iVenezuela neArgentina.
Emva kweChile, ePeru, e-Ecuador nase-Uruguay ukuba kunye kunye ne-10%.
Kucacile ukuba olu luhlalutyo lwabasebenzisi beSpanishi, kuba i-98% yezithuthi zeGeofumadas zithetha iSpanish. Ngokuqinisekileyo, ezinye iisayithi zigcwalisa i-Italiyane, isiFrentshi kunye namanye amazwe aseYurophu ukugcwala okukhulayo ngenxa yokusondela kunye noluntu olusebenzisayo. Njengoko izixhobo zisasazeka kwaye zabiwa luluntu olomeleleyo kunye namaziko, iSiseko siya kuba nekhefu kwizinto ezisixhalabisayo eziqhelekileyo ezisikhathaza sonke, ezinje:
Kunokwenzeka kangakanani ukuba ingxaki eYurophu inokuchaphazela umthombo wezemali osondla iphrojekthi?
Ewe okhuselayo obalaseleyo we-gvSIG kufuneka ibe ngabasebenzisi ababheja kwinkululeko esekwe kukhuphiswano olufanelekileyo noluzinzileyo. Kananjalo akufuneki ukuba silibale isabelo sekratshi esimele ukuba sinaso (ngaphandle kokungavisisani esinokuba nako), ukwenziwa kwamazwe ngamazwe ngesixhobo esazalwa kwimeko yethu yaseSpain kufanele kusizisela ulwaneliseko.
Ukuze ufunde kabanzi malunga neProjekthi yeGvSIG, ungabhalisela kwiWebinar eya kuba ngoLwesibili i-22 de Mayo
Post edlulileyo«Ngaphambilini Inkqubo yokuBekwa kwiHlabathi njengeprojekthi efanelekileyo kwezenzululwazi
Post Next Maps Invisibles, icebiso lam ukufundaOkulandelayo »
2 Iimpendulo "Baphi abasebenzisi be-gvSIG"
Kulungile Kwenye indawo kwinqaku elikhankanyiweyo.
Ndiza kucacisa kwiindaba eziza kuba ngabasebenzisi abakhuluma iSpeyin. i-gvSIG nayo inabasebenzisi bezinye iilwimi, umzekelo waseTaliyane, ngokuqinisekileyo ayiyi kufaka iphepha kwiSpanish.
Ngaphandle koko umsebenzi omhle kakhulu 🙂